Ireo Velirano 13 an’ i Andry Rajoelina – jEreo Ato
Co-fondateur de jEreoAto, Lead Web Developer et Machine Learning Engineer. Je publie ici sur ce que j'apprends, mes passions et tous ce qui mérite d'être publié. Publié le 17 janvier 2019 19 janvier 2019 - 4 minutes de lecture Catégories Politique
Fony mbola kandidà dia nanao velirano 13 ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina. Ireo velirano izay azo lazaina fa nahababo ny vahoaka malagasy amin’ny ankapobeny. Apetraka ho soratra ireto velirano 13 ireto handrefesana ny fanantanterahan’Andriamatoa filoha azy.
Laharam-pahamehana ny Fandriampahalemana sy ny Andavanandro tsara antoka. Ao anatin’izany :
Angovo sy Rano ho an’ny rehetra. Tafiditra amin’izany :
Ady amin’ny kolikoly ary Fitsarana tsy mitanila. Hampiarina :
Ny fanaovana ho modely ireo olom-boafidy sy ny mpasam-bahoaka
Ny fanavaozana sy ny fanamasina ny fitantana ireo fonja
Fahasalamana ho an’ny rehetra ka tsy misy sokajin-taona. Hampiarina :
Ny fanavaozana ny fizaràna ny fisotroan-dronono
Asa mendrika ho an’ny rehetra. Tafiditra amin’izany :
Ny Fampiroboroboana ny Indostria an’i Madagasikara :
Ny fanasongadinana sy fanelezana ny « Made in Madagascar »
Ny Vehivavy sy ny Tanora Malagasy tratry ny Ho avy. Amin’ny alàlan’ny:
Ny Fahavitana ara-tsakafo. Ho tratra io amin’ny :
Fanitarana ny fiompiana sy ny sehatry ny hazan-drano
Ny fitantanana maharitra ny harena voajanaharin-tsika. Ho tanteraka izany amin’ny :
Fanomezan-danja ny harena an-kibon-tanintsika
Fiarovana ny biby, ny zava-boary ary ny tanin-tsika
Madagasikara ho lasa moderna amin’ny alalàn’ny :
Fanamboarana trano ipetrahana sahazan’ny rehetra sy fanamorana ny findramam-bola raha hanorina trano na hiditra ny « Location-Vente ». Izany hoe, raha tsorina: manofa mandritran’ny fotoana voafetra dia lasa tompon’ilay trano ianao
Fandrindrana sy fiarovana ny fitaterana ho fanatsarana ny fifamoivoizana ny entana sy ny olona
Fampivelarana ny tanàn-dehibe nomerika
Fahavitan-tena sy fandraisana andraikitra eo amin’ireo faritanin-tsika. Tsy maintsy :
Mampandray andraikitra ireo faritanintsika amin’ny fampandrosoana, ary mametraka sy mampiroborobo sehatra ho an’ny firaisan-kina
Fanatanjahatena Ambom-pom-pirenena ka :
Fananganana foto-drafitr’asa ara-panatanjahantena vaovao maro indrindra any amin’ny faritany
La présidence, au chevet des sinistrés du Fokontany Ankorondrano Andranomahery